Phakathi nenkathi yokukhulelwa, umama okhulelwe uyaqaphela ukuthi impilo yezinwele zakhe, izipikili nesikhumba kungcono kakhulu, ngaleyo ndlela kudala umbono wokuthi umama uqobo uyakunakekela ukuze umama ozayo abe mnandi kakhulu. Kodwa ngemuva kokubeletha, isithombe sishintsha ngokuphambene nalokho: ukulahlekelwa kwezinwele okuqinisiwe kuqala. Kodwa siyini isizathu sokulahlekelwa lokhu nokuyeka ukulahlekelwa izinwele ngemuva kokubeletha?
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, ukuthuthukiswa kwezempilo kuhlotshaniswa nezinga eliphakeme lokugcwalisa umzimba womama ozayo nazo zonke amavithamini adingekayo, amaminerali kanye nezakhi. Kodwa okufanayo, isizathu esiyinhloko sokunciphisa ukulahleka kwezinwele ngesikhathi sokukhulelwa kuba khona kwe-hormone estrogen, okukhuthaza ukugqugquzelwa kwesigaba sezinsila ezingeni lezinwele zezinwele, ngaleyo ndlela kwandisa impilo yobuningi besifazane. Ngemva kokuzalwa kwengane evela kumama wakhe, isizinda se-hormone sishintsha kakhulu: izinga le-hormone ye-estrogen liyancipha futhi kancane kancane liba yinto evamile, kodwa lokhu konke kuyathinta izinwele.
Ama-nutrients, amavithamini namaminerali
Ngokuvamile, izinwele ziqala ukwehla ngenkuthalo ngenyanga yesithathu kuya kweyesine emva kokuzalwa futhi kulesi sikhathi, isizinda se-hormone semama sibuyela esimweni esijwayelekile. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abesifazane ngesikhathi bekhulelwe bathatha amavithamini, amaminerali kanye nezakhi zomzimba, kodwa kungani, emva kokubeletha, lawa mavithamini namaminerali ayeka ukuthatha? Phakathi nalesi sikhathi, kubalulekile kakhulu ukuthatha izakhi zomzimba ezidingekayo. Lokhu kuzosiza hhayi nje ukuyeka ukulahleka kwezinwele, kodwa futhi kusize ukuthola wonke amavithamini, amaminerali kanye nezakhi ezidingekayo kumntanakho ngobisi lomama.
Ukucindezeleka nokuntuleka okungapheli kokulala
Ngemuva kokuzalwa komntwana, impilo yomama osanda kuzalwa iba yinto ethokozisayo kakhulu futhi ingabonakali, okungaholela ekulahlekelweni kwezinwele. Uma ukuhlukunyezwa okuqhubekayo komama kuhambisana nokuntuleka kokulala okungapheli, isimo singase sibe sibi kakhulu futhi izinwele zizoqala ukuwa phansi. Ukuze unqande ukulahleka kwezinwele kule nkathi, kudingeka ulungiselele umbuso wosuku lomntwana. Uma ezinyangeni zokuqala umama osandulisiwe angaphupha kuphela iphupho elivamile lomuntu, bese ulala ubusuku ungakwazi ukuphumula kancane. Ngakho esikhundleni sokwenza umsebenzi othile ohlobene nokuhlanza noma ukuhlanza indlu, uphumule kangcono kanye nengane futhi maduzane uzobona ukuthi izinwele zakho zizophinde ziphilile futhi ziphilile.
Ngomdlalo onjalo owesifazane ohlala kuyo kunzima ukukhuluma ngokunakekelwa kwezinwele ezijwayelekile. Kodwa-ke, abesifazane kufanele bakhumbule ukuthi phakathi nalesi sikhathi awukwazi ukubutha izinwele endaweni yokugcina impahla esondayo bese udonsa umsila nge-band ehlanganisiwe eqinile. Uma usebenzisa ukuqina okuqinile, izinwele zakho ziyobe zihamba kahle futhi zingenakuphila. Futhi, ochwepheshe bakutshela ukuthi ubaleke ukusebenzisa izinwele zezinwele, izinwele zezinwele, izinwele zensimbi nezinye izinsimbi zezinwele phakathi nalesi sikhathi.
Ngakho-ke, kusukela kuzo zonke ezingenhla, manje singakwazi ukuphendula umbuzo oyinhloko wokumisa izinwele ngemuva kokubeletha:
Ukuze bayeke ukulahlekelwa izinwele, abesifazane kudingeka bazinake izinwele zabo, bathathe amavithamini, amaminerali kanye nezakhi, bawageze ngezimoto ezikhethekile zezinwele zezinwele ezibuthakathaka bese uzama isikhathi esiningi.
Indlela yokwandisa impilo yezandiso zezinwele
Ukunakekela izinwele ezinemibala: izindlela zokupheka ezenziwe ngokuzenzela
Amafutha omswakama omangalisayo: izindlela zokupheka ezithinta izinwele
Izinqubo ze-salon zokukhulisa ubuningi bezinwele
Kungani ngemuva kwesisu?
Imisebenzi yemidlalo yabantwana besikole
Indlela yokwenza abangane edolobheni elisha?
Ungaqala kanjani ukulahlekelwa isisindo kahle
Pie nama-mushroom anosawoti
Amandla aphikisayo: bangaki imisebenzi yepulasitiki eyenziwe ngu-Alexander Shpak, isithombe ngaphambi nangemva kwamaplastiki
Isondlo esifanele ne-cholesterol ephezulu
Ukususwa kwendawo ye-bikini
I-Herring ngaphansi kwengubo yesikhumba
Yini okudingeka ukwenze ukuze wenze umuntu enze isipho
UPolina Dibrova wamangala ngokumangala ngezindaba zokudla okumnandi
Inhloko yezinyosi ezinganeni, ukwelashwa kwe-pediculosis
Ukuhalalisela kakhulu emshadweni ngamazwi akho ku-prose nevesi
Iyini uthando "namafomu akhe"